Gabar somali la qabo Oo waxbikra jebiya lawaayay (Arin Cajiib ah Akhriso) | Gaaloos.com
Home » galmada » Gabar somali la qabo Oo waxbikra jebiya lawaayay (Arin Cajiib ah Akhriso)
Gabar somali la qabo Oo waxbikra jebiya lawaayay (Arin Cajiib ah Akhriso)
Waxa aduunka ku noolnahey ka dhaca mucjisooyin badan oo xagga alle ka timid, waxaan halkan ku soo qaadaneynaa sheeko cajiib ah oo la yaab leh, balse ah wax ka dhici kara aduunka dacaladiisa, inkastoo aysan aheyn wax aynu mar walba maqalno. Waxaa gubtanews la soo xiriirey nin Magaciisa ku sheegay Maxamed waxa oona nooga sheekeeyeye dhibaato isaga iyo xaaskiisa haysata.
Fikir dheer iyo go’aan badan kadib ayuu Maxamed u qalab qaatey in uu shaqada ku guuleysto habeenkii labaad isaga oo is leh “war waa caadi in gabdhaha bikrada ah qaarkood ay aad u malaasan yihiin oo aanan ciyaar ciyaar lagu furi karin” Wuxuuse Maxamed noo sheegey in geedkiisa uusan weyneyn oo uu yar yahey balse uu awoodi jirey in uu horey u galo xaaskiisii hore oo iyada laftigeedu bikro aheyd markuu guursadey. Maxamed oo waxba weydiin Fartuun ayaa sariirta lawada aadey isaga oo wadnaha sida tuug laqabtey u bood boodayaan, kana cabsi in mar labaad ku guul dareysto shaqada.
Hadaba aqristayaasha sharafata leh, waxa uu Maxamed idinka codsanayaa inta uusan iskafurin ama dhaqtar u tegin, maxaad arintaas ka leedihiin. Marka hore ma maqasheen mase aragteen arintan oo kale in qof Soomaali ah oo ku dhacdey, hadey jirtnan sidey wax looga qabtey. Marka labaad maxey diinta Islaamka ka qabtaa in xaaska mudo gaaban la furo lana siiyo qof kale kadibna ay isku soo laabtaan mar danbe. Hadaba waad mahadsantihiin dhamaantiin waana idinka sugeynaa talo wacan iyo tusaale fiican.
Title: Gabar somali la qabo Oo waxbikra jebiya lawaayay (Arin Cajiib ah Akhriso)